Raw Pramiracetam poids (68497-62-1) mpanamboatra - Phcoker
Raw Pramiracetam poids (68497-62-1)
Ny vovonan'Itompokolahy Pramiracetam dia fanodinana racetam synthetic ho an'ny tanjon'ny fampivoarana kognitive ...
fahafahana: 1018 kg / isam-bolana
SKU: 68497-62-1 Sokajy: Drug Smart
Raw Pramiracetam vovoka (68497-62-1) video
Raw Pramiracetam vovoka (68497-62-1) Description
Ny vovonam-bovoka Ram Pramiracetam (fantatra ihany koa amin'ny hoe Pramistar) dia fampitomboana (nootropic) manaitaitra izay manintona avy amin'ny piracetam, ny racetam tany am-boalohany, amin'ny fanolo ny vondrona amide ao amin'ny piracetam miaraka amin'ny vondrona ethyl dipropan-2-ylamino. Io famokarana io dia mamela ny vovo-dronono Raw Pramiracetam ho mahery kokoa noho ny piracetam.
Ny môtera amin'ny vovo-dronono Raw Pramiracetam dia tsy fantatra loatra, fa toa hita fa nanova ny fatran'ny EEG teo amin'ny voalavo fisedrana (tanora na antitra) ary mety ho afaka hanatsara ny fikarakarana choline avo lenta. Toy izany koa ny piracetam sy ny racetams hafa raha ny heviny dia toa miankina amin'ny vongan-dranomamy sy ny vokatra sasany, fa ny rafitra dia tsy voamarina amin'ny fomba hafa.
Raw Pramiracetam vovoka (68497-62-1) Specifications
Product Name Raw Pramiracetam vovoka
Anarana simika Amacetam, Raw Pramiracetam powderum
molekiolan'ny Formula C14H27N3O2
molekiolan'ny Wvalo 269.38 g / mol
mitsonika Point 47-48 ° C
vayma- Point bp0.15 162-164 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Tokony ho ora 5
Solubility H2O: soluble10mg / mL, mazava
Application Hampitombo ny fahatsiarovana sy hampitombo ny fahaiza-mianatra
Raw Pramiracetam powder (68497-62-1) Description
Ny vovon-tsakafo Pramiracetam dia rafitra an-kibon-dranomasina afovoan-tsela ary ny mpandraharaha tsy misy mpilatsaka amin'ny fianakaviana racetam. Ny Pramiracetam dia iray amin'ireo atidoha matanjaka indrindra amin'ny fanamafisana ny nootropic misy, 5 hatramin'ny 30 fotoana mahery kokoa noho ny havany. Manatsara ny fifantohana, ny fifantohana, ary ny fahatsiarovana. Mifanohitra amin'ny sasany amin'ireo racetams hafa, ny pramiracetam dia notsapaina tamin'ny olon-dehibe salama fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny zokiolona izay efa very ny fahaiza-manaony. Amin'ny ankapobeny, ny pramiracetam dia manampy amin'ny fametrahana fahatsiarovana maharitra mandritra ireo fitsapana ireo.
Io nootropic dia mihetsika toy ny mpitsabo amin'ny atidoha ary afaka manakana ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena sy ny fihenan'ny kognitika ankapobeny.
Pramiracetam powder (68497-62-1) Mekanisma amin'ny asa
Tahaka ny ankamaroan'ny racetams, ary tena tsy misy loatra ny otrikaretina, ny pramiracetam dia misy fiantraikany amin'ny famoahana ny simika ao amin'ny atidoha, antsoina hoe neurotransmitters, izay mamela ny fifindrana famantarana eo amin'ny sela nerve. Nefa, ny pramiracetam dia manao zavatra hafa kely. Tsy manosika mivantana avy hatrany ireo tranonkala mpandidy ny neurotransmitter, ny vokatr'izany dia mety hampiakatra ny famokarana sy ny famotsorana azy io ho an'ny neurotransmitter manokana.
Manampy amin'ny fisainana mazava i Pramiracetam. Ny Pramiracetam dia miasa amin'ny fampitomboana ny Choline avo lenta amin'ny hippocampus. Raha ny sitrapony no mety, ny Choline dia toy ny diplaoma amin'ny neurotransmitter antsoina hoe Acetylcholine, izay mpilalao fototra amin'ny fikolokoloana tsindrona toy ny fifantohana, fianarana haingana sy fahatsiarovana. Noho izany, inona no ataon'ny pramiracetam manova ny tranonkalan'ny receptor ho an'ny Acetylcholine, izay manatsara ny asany amin'ny hippocampus. Ity hetsika fanampiny ity dia manatsara ny fananganana ny fahatsiarovana vaovao sy ny fijerin'ny olon-dehibe.
Ny vovonam-paty Pramiracetam dia novolavolan'i Parke-Davis tany amin'ny 1970s ary nosoratana tany Etazonia tamin'ny 1979. Na dia efa nodinihana be dia be toy ny fitsaboana ny olana momba ny fahatsiarovan'ny atidoha sy ny aretina toy ny Alzheimer aza izy, amin'izao fotoana izao dia tsy ankatoavin'ny FDA noho izany fampiasana manokana izany.
Izany dia nilaza fa nahita fahombiazana bebe kokoa tany Eorôpa i pramiracetam. Nividy teo ambanin'ny anarana marika Neupramir, Pramistar, ary Remen, dia matetika no soratana amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana vaovao toy ny dementia, dyslexia, ary ADHD.
soso-kevitra Pramiracetam powder (68497-62-1) Dosage
Ny dosimetera tsara indrindra dia miovaova amin'ny olona ho an'ny olona, ​​ny dosage nomena ny pramiracetam dia 600mg-1200mg, io dia manoro ny fizarana ny tsimok'aretina isan'andro amin'ny dosie roa na telo, satria ny pramiracetam dia manana 5 hatramin'ny 6 ora antsasak'adiny. Arakaraky ny habetsahanao no nizaranao ny doka nandritra ny andro, ny mifanaraka kokoa amin'ny haavon'ny tsy diaotropic dia ao anatin'ny rafitrao, ary ny tsara kokoa ny vokatra ankapobeny.
Ny fikarohana nataon'olombelona dia nahitana fitomboam-bolana isan'andro amin'ny 1200 mg of pramiracetam, izay hita fa sady mahomby no sady mandefitra ary mety ho foto-kevitra tsara amin'ny famaritana ny filàna manokana. Saingy fahendrena hatrany ny manomboka amin'ny doka mahomby indrindra ary manitsy ny isa araka izay ilaina.
soa of Pramiracetam powder (68497-62-1)
Fahatsiarovana tsaratsara kokoa
Fampitomboana ny fahatarana sy ny fianarana ambony
Ny fahaiza-manao ny Neuroprotective
Roandine hydropromide ho an'ny Galantamine (69353-21-5)
Ny vovo-dronono hydropromide galantamine dia cholinesterase inhibitor izay nampiasaina mba hiverenana ...... ..
Rano N-methyl-D-aspartic aspirinina (NMDA) (6384-92-5)
Ireo mpanohitra mpanemotra N-Methyl-D-aspartic (NMDA) dia mpanaraka ny mpanohitra ny mpanohitra.